Hampianatra Amin’ny Fiteny Swahili I Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2015 13:14 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, 日本語, Español, Esperanto , 繁體中文, 简体中文, Aymara, English
Mpianatra ao Arusha, Tanzania. Sary ampiasàna ny lisansa Creative Commons , an'i Colin J. McMechan, mpampiasa Flickr.
Miomana ny handray kihon-dàlana ho raketin'ny tantarany i Tanzania amin'ny fanoloana ny teny Anglisy ka hampiasàna ny swahili ho teny entina mampianatra any an-tsekoly manerana ny firenena.
Ny 13 febroary 2015, natomboky ny filoha Jakaya Kikwete, ao anatin'ny Vinam-pirenena 2025, hanitatra ny ambaratonga fototra 7 taona ho lasa 11 taona ity rafi-panabeazana vaovao ity. Nofoanany koa ny fanaovana fanadinam-pirenena rehetra amin'ny ambaratonga fototra ary hatao maimaim-poana ny fanabeazana any amin'ny fanabeazana fototra ihany.
Sambany teo amin'ny tantara no misy firenena iray ao Afrika hanome lanja ny fampianarana amin'ny teny Afrikana fa tsy amin'ny tenim-pirenena vahiny ho an'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga rehetra.
Maneho hevitra amin'ity fitsimbadihan'ny teny ity dia nanamarika i Atetaulwa Ngatara, sekretera maharitry ny Ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fiofanana momba ny asa, fa ho ampianarina hatrany ny teny Anglisy. Kanefa, tsy horaisina intsony ho tsy maintsy ilain'ny mpianatra io ny hianatra ny taranja rehetra amin'ny teny Anglisy.
Niteraka valinkafatra mifamahofaho be ny lahatsoratra iray miresaka io fiovàna ara-politika io navoaka ao amin'ny Facebook, avy amin'i Oliver Stegen, mahay ny fiteny swahili fa manam-piaviana Alemàna no sady mpanolotsaina momba ny teny ao amin'ny SIL International
Manàla azy amin'izany i Nancy Petruzzi Maurer :
Good mauning teacha !” Tsy misy anampiana azy.
Mametraka fanehoankevitra iray amin'ny teny swahili i Paul A Kijuu, ka ao no hanazavàny fa namadika ny kilasy ho toy ny milina mpanatanteraka baiko ny teny anglisy :
Ho ahy, Oliver Stegen, heveriko fa fanapahankevitra tsara io. Ny olona dia tsy manao afa-tsy ny mitaraina isika. Tokony ho ny teny azon'izay hampiasa azy no anaovana ny fanabeazana. Ankoatry ny famadihana antsika ho toy ny milina mpanatanteraka baiko, tsy dia manampy antsika loatra ny teny Anglisy. Tsy afaka ny hisaina malalaka ireo vato nasondrotry ny tany avy eto amintsika satria tsy tàkany izay nianarany.
Mampahatsiahy i Vera Wilhelmsen fa raha tsy ny olona rehetra no mila mandalo oniversite; dia ilain'ny olona rehetra kosa ny zo hahazo fanabeazana tsara kalitao :
Heveriko fa tena zava-dehibe ny mijery izay fanabeazana fototra tena ahitan'ny maro tombony. Azo antoka fa vitsy amin'izao fotoana izao ny olona tonga eny ambonin'ny dabilion'ny ambaratonga faharoa, ary mbola vitsy amin'ireo no mivoaka mahazo diplaoma. Raha toa ny mpianatra sy ny mpampianatra ka tsy voaomana hiala amin'ny anglisy ho amin'ny swahili, dia hametraka olana goavana izany. Mila jerena akaiky ny fiantraikan'io fanovàna io, saingy efa dingana tsara mankany aloha amin'ny lafiny rehetra mihitsy io. Tsy ny rehetra no mila mankany amin'ny oniversite nefa kosa mendrika ny rehetra ny hahazo fanabeazana fototra !
Tsy mbola ny rehetra anefa no manaiky ilay rafi-panabeazana vaovao. Tsipihan'i Steve Nicolle ny iray amin'ireo antony mety hampidi-doza ao anatin'ity politika vaovao :
Ny fiantraikany iray mampanahy ahy ho aterak'ity lalàna vaovao ity dia ny fitomboan'ny fampidirana ny ankizy hianatra any amin'ny sekoly tsy miankina, izay hanohy ny hanome fampianarana amin'ny teny Anglisy. Asio maso akaiky ireo politisiana, amin'ny hoavy, izay mety hanome alàlana fanokafana sekoly vaovao hampianatra amin'ny teny Anglisy !
Mitovy hevitra amin'i Steve Nicole i Elly Gudo, tamin'ny faminavinàna fa ireo politisiana no tena hivoaka hahazo tombony amin'io politikam-panabeazana io :
Miombon-kevitra tanteraka amin'i Steve Nicolle aho. Efa ela niainana tao Tanzania, azoko atao tsara ny manamafy aminareo fa ireo politisiana no tena hivoaka hahazo tombony amin'io politika vaovao momba ny fanabeazana io. Ny ankamaroan'ireo saranga salantsalany sy manan-katao, izay mihevi-tena ho ao anaty tanàna iray ao anaty fanatontoloana, dia hanao izay tratry ny heriny hampianatra ny zanany any amin'ireo sekoly mampiasa sy miteny Anglisy. Ny zanaky ny sahirana araka izany no tena ho voa mafy sy sahirana rehefa hiditra oniversité, ary azo hitarina hatrany amin'ny resaka fitadiavana asa. Ato anaty 20 taona, hampizarazara ny firenena ireny saranga ireny. Amin'ny endriny rehetra, mila manao revôlisiôna toy ny nataon'ny frantsay i Tanzania.
Manohitra an'io politika io, i Muddyb Mwanaharakati no mandefa ity hafatra manaraka ity amin'ny teny swahili :
Aza mampihomehy ahy, ry Oliver Stegen ! Avadik'izy ireo ho lasa politika ny olana. Ny zanaky ry zalahy alefa any aminà sekoly iraisampirenena [izay ny teny anglmisy no entina mampianatra]. Isika, mahantra, hanohy handeha any amin'ireo sekolintsika tsizarizary sy tsy dia mahavita azy, ary isika hothizantsika ny fomban'ampondra amin'ny teny anglisintsika “ya-ya-yes-no-yes-no”, raha ny zanak'izy ireo kosa hiteny tsy miambakavaka ny teny Anglisy. Ry Oliver, mbola lavitra ny fiovàna isika, na ny afisy sy ny famitam-baovaon'ny governemanta aza mbola betsaka no amin'ny teny Anglisy any amin'ny faritra maro any.
Josephat Rugemalira manamarika fa tsy tena miainga ifotony araka ny inoan'ny olona azy ilay politikam-panovàna vaovao :
Ilainareo ny mamaky antsakany sy andavany izay voasoratra momba io pôlitika io. Voasoratra fa hoe ampianarina amin'ny ambaratongam-pianarana rehetra ny swahili ary voasoratra IHANY koa fa ampiasaina amin'ny ambaratonga rehetra ny Anglisy (izay midika fa hatrany amin'ny fanabeazana fototra). Ho ahy, ny zavatra vaovao tokony hotànana ao anatin'ity fanavaozana ity, dia ny fahafahan'ny olona sasantsasany mameraka sekoly ambaratonga faharoa mampiasa ny teny swahili, fa koa ho an'ireo solontenam-panjakana eny an-toerana, hamadika amin'ny fomba ofisialy ireo sekoly ambaratonga fototra tsy miankina efa misy ao mba ho lasa sekoly mampiasa sy miteny Anglisy.
Maneho hevitra amin'io lahatsoratra io ihany, izay noraisin'ny Trending Kenya, hazavain'i Margaret Njeru fa tsy manafoana ireo tenim-pirenena vahiny na ny teny faharoa akory ilay rafi-panabeazana vaovao. Ny mifanohitra amin'izay aza, mametraka azy ireny ho ami'ny toerany tokony hisy azay ao anatin'ny dingan'ny fandrantoana fahalalàna :
Tena sahisahy ity rafitra vaovao ity ary mankany aminà zotra natao haleha. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana, ary ny fandrosoaa dia miankina amin'ny teny izay takatry ny vahoaka. Eran'izao tontolo izao, tsy misy mihitsy toekarena niroborobo tamin'ny fianteherana tami'ny tenim-pirenena vahiny, ary ny fampiasàna ireo tenin'ny mpanjanatany fahiny tao Afrika dia nandray anjara betsaka tamin'ny fanilikilihana ny ankamaroan'ireo vahoaka tsy ho ao anatin'ny dingan'ny fampandrosoana. Raha tiantsika ny hamaritra ny làlan'ny fampandrosoan”ntsika”, dia mila mifanindran-dàlana aminy koa ny fisafidianana ny teny ampiasaina. Ary izany tsy midika velively ho fandraràna ny tenim-pirenena vahiny (na ireo teny faharoa), fa famerenana azy ireny ho amin'ny toerany tokony hisy azy ao anatin'ny dingan'ny fandratoana fahalalàna.
Kwame Aboagye maminavina hoe fotoana ireo ho an'ny Afrikana hanehoany hevitra amin'y fiteniny :
Tena efa fotoana izao ho antsika, firenena afrikana, hitenenantsika ireo tenim-paritra aty amintsika, toy ny twi, ny yoruba, ny swahili ary ny mandingue. Tsy tenindrenintsika mihitsy ny anglisy. Mila mifoha isika ary miverina amim-pireharehàna amin'ny maha-izy antsika eo ami'ny lafiny fiteny.
Goavana be io kihon-dàlana io, saingy miaraka aminy dia misy fanamby tsy azo tsinontsinoavina, ho i Christina Higgins manamarika :
Tena vaovao tsara na izany aza. Ny ilaina fantarina sisa dia fomba hiantohana ny tetezamita hifindràna mankany amin'ny swahili amin'ny resaka fitaovana enti-mampianatra, ny fanadinana… Na eo aza ireo fanamby tsy maintsy atrehana, dia tena kihon-dàlana goavana be io.